AirPods 3 sy Apple Music Hi-Fi ny talata 18 mey? | Avy amin'ny mac aho
AirPods 3 sy Apple Music Hi-Fi ny talata 18 mey?
Jordi Gimenez | 14/05/2021 12:00 | tsaho
Ny tsaho momba ny mety hahatongavan'ny AirPods 3 vaovao miaraka amin'izay fa fanatsarana ny kalitaon'ny Apple Music dia mbola eo ihany. Amin'ity tranga ity dia tsaho iray mametraka ny fahatongavan'ireto AirPod vaovao sy ny kalitaon'ny feo Hi-Fi ao amin'ny Apple Music ny talata 18 mey ho avy izao.
Ny vaovao momba ny AirPods an'ny taranaka fahatelo dia avy lavitra ary amin'ity tranga ity dia toa afaka nanakaiky kokoa noho ny hatramin'izay izy ireo tamin'ny fampisehoana nataon'izy ireo. Tsy vaovao nohamafisin'i Apple, lavitra azy io ary tsy antenaina hanao hetsika ho azy i Apple, handefa azy ireo fotsiny amin'ny tranokala ho fanavaozana izany ary hiparitaka amin'ny tambajotra haingana toy ny mahazatra.
Ny vaovao / tsaho dia avy amin'ny tanan'ny youtuber
Luke miani niandraikitra ny fampisehoana ny vaovao navoakan'izy ireo taloha AppleTrack. Mazava ho azy ny tsaho momba ny fahatongavan'ireto AirPod vaovao ireto dia avy lavitra ary tsy afaka manilika izay mety ho izy satria vokatra tokony ho tara vao maraina, na amin'ny WWDC na alohan'izay.
Antenaina fa amin'ny talata 18 aprily ho avy izao dia hanana ny famoahana ireo headphone tsy misy tariby vaovao avy any Apple ireo isika izay hanana endrika mitovy amin'ny an'ny AirPods Pro amin'izao fotoana izao fa tsy misy ny ampahany silikola ary tsy misy fanafoanana ny tabataba mavitrika. Hiandry ny talata ho avy izao isika momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » AirPods 3 sy Apple Music Hi-Fi ny talata 18 mey?
Hadalana inona, izy ireo dia ho toy ny tsy misy tariby airpods 2 fa toy ny zava-baovao, mafana fo, fiafaran'ny tantara.
Nilaza ny filoham-pirenena IBM fa mety haharitra roa taona mahery ny tsy fahampian'ny chip